उपनिर्वाचन : कास्की-२ मा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ अंकगणित – Dcnepal
उपनिर्वाचन : कास्की-२ मा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ अंकगणित
प्रकाशित : २०७६ कार्तिक २८ गते ८:०७
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र कास्की–२ चर्चाको शिखरमा छ । मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभामा १, प्रदेसभामा ३ र स्थानीय तहका ४२ पदमा निर्वाचन हुँदैछ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएसँगै उनी निर्वाचित क्षेत्र (कास्की–२) प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त रहेको थियो । कास्की २ मा हुने उपनिर्वाचनमा २१ जना उम्मेद्वार प्रतिष्पर्धामा छन्।
कार्तिक २१ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १४ दल र ११ स्वतन्त्र गरी २५ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएको भएपनि तिमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पुरुषोत्तम खनाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका गजेन्द्र संबो लिम्बु, राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका नवराज घले र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका जयवन्त विक्रम शाहको उम्मेदवारी खारेज भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।
उपनिर्वाचनका लागि नेकपाबाट स्व.रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट खेमराज पौडेल, साझा पार्टीबाट रजनी केसी, राप्रपाबाट रोमबहादुर भण्डारी, काँग्रेस (वीपी) बाट चन्द्रबहादुर रानाभाट, नेकपा (माले) बाट टेकनाथ भण्डारी, समाजवादी पार्टीबाट धर्मराज गुरुङ, राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट पूर्णबहादुर राना, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट रियाज गुरुङ, देशभक्त समाजबाट वीरबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बाट गंगा मल्ल र विवेकील नेपालीबाट जमुना शर्मा उम्मेदवार छन्।
यस्तै, १० स्वतन्त्र उम्मेदवारमा कमलजंग कुँवरसहित उमनाथ गौतम, जमुना शर्मा, दीपक रेग्मी, नवराज बास्तोला, यज्ञप्रसाद पंगेनी, रनबहादुर दमै, लक्ष्मीकुमारी भुजेल, सुनीलबहादुर कोइराला र सुनील भुषाल रहेका छन् ।
अघिको चुनावी नतिजा
यसअघि २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा १३ जना उम्मेद्वारले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसबाट तत्कालिन एमालेका नेता तथा बाम गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार रविन्द अधिकारी ८ हजार ५ सय ४६ मतान्तरले विजयी भएका थिए । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासद् भईसकेका रवीन्द्र अधिकारीले २०७४ को निर्वाचमा २७ हजार २ सय ७ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत पाएका थिए । त्यतिबेला ७० हजार ६ सय मतदाता रहेको कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा ४९ हजार ९ सय १३ मत खसेको थियो ।
कास्की २ मा २०७४ सालको निर्वाचनमा १३ जना उम्मेदवारले पाएको मत
१५ सय ४९ नयाँ मतदाता
२०७४ सालको निर्वाचन पश्चात कास्की २ मा १५ सय ४९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदाता रहेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ७२ हजार २ सय पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।
अबको चुनावी अंकगणित
नेकपा उम्मेदवार विद्या भट्टराई (अधिकारी)
चुनाव प्रचारको शुभारम्भमा नेकपा उम्मेद्वार भट्टराई
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कास्की क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराई (अधिकारी) लाई उम्मेदवार बनाएको छ। भट्टराई यसअघि सोही क्षेत्रबाट ३ पटक निर्वाचित भईसकेका तत्कालिन एमालेका नेता तथा पर्यटन मन्त्री स्वः रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन् । विद्यार्थी राजनीति गरेर तत्कालिन एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सचिवसम्म भएकी उनी रवीन्द्र अधिकारीसँग ५६ सालमा विहे गरेपछि सक्रिय राजनीतिबाट टाढिएकी थिइन् ।
५६ सालबाट राजनीतिमा सक्रिय नभएकी विद्या भट्टराई हाल कास्की २ को प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्दै छिन् । यो क्षेत्र उनकै श्रीमान रवीन्द्र अधिकारीले ७४ सालको निर्वाचनसहित ३ पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा उनको सक्रिय राजनीति नभएपनि अधिकारीको राजनीति, उनका सहकर्मीसँगको भेटघाट, छलफल र सहकार्यले भट्टराईलाई चुनावमा केही सहज बनाएको छ। भट्टराईले सहानुभूतीको मत पनि पाउन सक्छिन् भने पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ताको पनि पूर्ण समर्थन हुनसक्छ ।
तर ७४ सालमा पूर्ण बहुमत ल्याएको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले खासै उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको आरोप छ। नेकपाका मन्त्री र सांसद्हरु कामभन्दा कुरा र कुराभन्दा बढी गाली गलौजमा लागेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला उपनिर्वाचन नेकपाका लागि त्यति सहज छैन । सरकार विभिन्न काण्डमा जेलिएको छ । निर्मला बलात्कार र हत्या काण्ड, सुन काण्ड, सिन्डिकेड काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, गाई काण्ड, भ्रष्ट्राचार काण्ड, विधेयक काण्ड, गुठी काण्ड, बालुवाटार काण्डले सरकारको आलोचना भईरहेको छ ।
नेकपाबाटै दाङबाट निर्वाचन जितेर संघीय संसद्को सभामुख बनेका कृष्ण बहादुर महारा बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पपक्षका लागि कारागार चलान भईसकेका छन् । यस्तो समयमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपालाई निकै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाकी उम्मेद्वार भट्टराईले चुनाव जित्ने अनेरास्ववियुका पूर्व उपाध्यक्ष तथा स्थानीय नेकपाका नेता रश्मी आचार्यको दाबी छ । डिसी नेपालसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले भने, “नेकपाको साङ्गठनिक आधार नै बलियो छ, त्यसमा पनि नेतृ विद्या भट्टराईमा स्वः नेता रवीन्द्र अधिकारीकै अनुहार देखिने भएकाले यस क्षेत्रमा विद्याको जित सुनिश्चित छ।”
“अघिल्लो निर्वाचनमा रवीन्द्रलाई जनताले ५ वर्षका लागि जिताएका थिए । राष्ट्रकै विकासको एजेण्डा बोकेका अधिकारीको अल्पायुमै निधन भएकाले उहाँको विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्नका लागि पनि जनताले भट्टराईलाई नै जिताउँछन्,” उनले थपे। यसअघि स्वर्गीय अधिकारीले पाएको मतमात्र संरक्षण गर्न सके विद्याले सजिलै चुनाव जित्न सक्नेछिन्।
कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेल
चुनाव प्रचारमा कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेल
कास्की क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका खेमराज पौडेल कांग्रेसका पाका र परिपक्व नेताका रुपमा चिनिन्छन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा होमिएका पौडेल पूर्व सभामुख तथा कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाट र शुक्रराज शर्माका सहकर्मी हुन् ।
रानाभाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, पार्टी प्रवक्ता, सांसद् मन्त्री र महामन्त्री हुँदै प्रतिनिधिसभाको सभामुखसम्म बनिसकेका छन् भने शर्मापनि राष्ट्रिय सभा सदस्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य भईसकेका छन् । तर राजनीतिमा सर्बमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका असली चेला भनेर चिनिने पौडेल अहिले पनि राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । कास्कीमा सर्बमान्य नेताकै रुपमा रहेका पौडेलले टिकट पाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय मौलाएको कास्की कांग्रेसको गुटबन्दीलाई पौडेलको उम्मेद्वारीसँगै एकढिक्का बनाएको र जित पनि काँग्रेसकै हुने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले डिसी नेपाललाई बताए।
परियारले भने, “अहिले कास्कीमा कांग्रेसले इतिहाँस रच्नेवाला छ। यसअघिका चुनावमा मन फुकाएर एकढिक्का हुन नसकेको कांग्रेस अहिले उपनिर्वाचनमा एकढिक्का भइरहँदा कार्यकर्तामा उर्जा थपिएको छ भने मतदातामा पनि चासो बढेको छ। त्यसमा पनि सरकारको काम, भाषण र व्यवहारबाटै आर्जित भएका जनताले सरकारका विरुद्ध मत दिने यो उपयुक्त अवसर पनि हो । हामी ढुक्क छौँ, अहिले जनताले निर्विकल्प रुपमा कांग्रेसको रुख चिञ्हमा भोट दिएर पौडेललाई विजयी गराउँनुहुनेछ ।”
तर, उनको प्रतिष्पर्धा नेकपाकी विद्यासँग हुनेछ। माओवादी केन्द्र र एमाले दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपा ठूलो पार्टी हो। यसको संगठन काँग्रेसमाथि भारी पर्न सक्छ। त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दल भएकाले स्वभाविक रुपमा मतदातालाई लोभ्याउने आश्वासन दिन जति विद्यालाई छ, खेमराजलाई छैन। काँग्रेसले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको घट्दो लोकप्रिताकै जगमा आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएको छ। नेकपाबाट रुष्ट बनेका मतदातालाई आकर्षित गरेमात्र खेमराजले जित प्राप्त गर्न सक्छन्। उनले यसअघिको निर्वाचनमा काँग्रेस उम्मेदवारले पाएको करिब ९ हजार मत आफुतिर आकषर्तिक गर्नुपर्ने छ भने नयाँ थपिएका मतदातालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य दलका उम्मेद्वार
अघिल्लो निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा तेस्रो स्थानमा आएको तत्कालिन विवेकशील साझा पार्टी अहिले भने दुई ढिक्कामा विभाजित भएको छ। रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी र मिलन पाण्डे नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दलले पनि उपनिर्वाचनमा आ–आफ्नै उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्।
यसअघि कांग्रेसमा सक्रिय रहेकी रजनी केसीले साझा पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिएकी छिन् भने विवेकशील दलबाट अधिकारकर्मी समेत रहेकी जमुना शर्माले उम्मेद्वारी दिएकी छिन्। साझाबाट उम्मेद्वारी दिएकी केसी करिब २ महिनाअघि मात्रै कांग्रेस परित्याग गरी साझा पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा एकीकृत विवेकशील साझा पार्टीले ८४३ मत प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रकै वैकल्पीक शक्ति भनेर स्थापना गरिएको साझा विवेकशील पार्टी विभाजन भएसँगै कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा झन कमजोर बनेको छ।
त्यस्तै कास्की २ को उप निर्वाचनमा नेकपा (माले) समाजवादी पार्टी नेपाल, राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) लगाएतका दलले पनि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।